#Madagascar – Fiovan’ny kalitaon’ny gazoala : tsy manaiky ny fisondrotam-bidy ny mpitatitra | ONG Lalana Blog
#Madagascar – Fiovan’ny kalitaon’ny gazoala : tsy manaiky ny fisondrotam-bidy ny mpitatitra
Araka ny fepetra vaovao noraisin’ny fanjakana, ovaina ny kalitaon’ny solika gazoala ampiasaina eto Madagasikara. Hihoatra 60 ka hatramin’ny 70 Ar isaky ny litatra, amin’ny vidiny ankehitriny, io fiovana io. Tsy manaiky izany ny mpitatitra, satria tsy maintsy hiantraika any amin’ny mpanjifa ny fisondrotana.
Nahemotra ! Nohalavain’ny minisiteran’ny vokatra ara-tsolika, hatramin’ny faran’ny volana novambra 2012, ny fe-potoana azo ivarotana ny solika gazoala, manana kalitao 5.000 ppm. Tokony hatramin’ny faran’ny jolay izao mantsy ny fe-potoana nomena, saingy nangataka ny kaompania mpaninjara solika fa tsy maintsy hiantraika any amin’ny vidin-tsolika io fanovana kalitao io. Tombanana ho 60 Ar ka hatramin’ny 70 Ar, isaky ny litatra amin’ny vidiny ankehitriny, mantsy ny fampiasana ilay gazoala vaovao manana kalitao 500 ppm. Tsikaritra tokoa mantsy fa ny kaompania Galana irery, amin’ireo efatra misy, no hahazo tombontsoa voalohany amin’ity fanovana ity, satria efa tsy nanafatra afa-tsy io kalitao vaovao izy nanomboka ny volana janoary teo. Amin’iretsy kaompania telo hafa, hiantraika any amin’ny saram-pitaterana, ny saran’ny Jirama ary ny vidin-javatra andavanandro ny fanovana an’io kalitao io amin’izao firenena mandalo fotoan-tsarotra izao. Ny fanjakana, anefa tsy hahavita hanampy ara-bola ny kaompania na ny mpitatitra na ny Jirama, noho ny tsy fananam-bolany koa. Araka ny fangatahan’izy ireo, tsy maika ny fotoana hampiharana io fepetra vaovao io, ankoatra ny lafiny tontolo iainana. Noho izany indrindra no nahatonga ny fanjakana hanalava hatramin’ny faran’ny volana novambra, ny fe-potoana azo ivarotana ny gazoala 5.000 ppm. Notazonina hatramin’ny faran’ny volana jolay izao kosa anefa ny fanafarana azy.
Hiantraika any amin’ny vidin-javatra
Manoloana ireo, tsy manaiky ity fepetra vaovao ity koa ny mpitatitra, raha aravona ny fanehoan-keviny. Nilaza ny filoha lefitry ny mpitatitra eto an-drenivohitra (Uctu) fa nanome toky azy ireo ny Praiminisitra, nandritra ny fihaonany ny volana marsa teo, fa hanampy ny fanjakana raha vao misondrotra vaovao ny vidin-tsolika. Tsiahivina fa tokony ho nisondrotra ny volana mey teo ny vidin-tsolika. Midika izany fa tsy manaiky ity fanovana ny kalitaon’ny solika, hitarika any amin’ny fisondrotany koa, ny mpitatitra. Manamafy izany koa ny mpitatitra entana, izay nitsotra fa « tsy afa-manoatra izahay, ka tsy maintsy hiantraika any amin’ny fisondrotan’ny saran-dalan’ny entana ny fiakaram-bidy, mitarika ny fiakaran’ny vidin-javatra ».
Noho ireo, hanampy trotraka ny fiovaovan’ny vidin-tsolika (indrindra raha misondrotra) eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ity fepetra fanovana ny kalitaon’ny gazoala ity. Ny mpanjifa hatrany anefa no hizaka ny vokany satria ny fanjakana efa tsy afa-manoatra hanampy intsony.
Posté par Taratra on juin 14, 2012